Uncategorized | CeleTrend
ကျွန်တော် က ငယ်ငယ်ထဲက ဆိုးပေခဲ့ပါတယ်။ ပညာလည်းကောင်းကောင်းမသင်ချင် သူငယ်ချင်းတွေနဲက ပဲ ဟေးလား ဝါးလား နေချင်ခဲ့သူမို့ အသက် နှစ်ဆယ်လောက်မှာပဲ အဲဒီခေတ်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ သင်္ဘောသား အလုပ်ကို ကျွန်တော့် မိဘတွေက ရအောင် လုပ်ပေးပြီး သင်္ဘောပေါ်တင်ပေးခဲ့တာပါ။ သင်္ဘောသား ဘဝနဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံကဲခဲ့ပြီး ဆယ်နှစ်လောက်အကြာမှာပျင်းလာတာနဲ့ အမေရိကန်ဆိပ်ကမ်းတခုမှာ သင်္ဘောပေါ်က ခုန်ချခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီမှာပဲ ကြုံရာကြဘန်းလုပ်ရင်း အမေရိကန်မ တယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ခလေးနှစ်ယောက်ရ၊ အမေရိကန်အရှေ့ဘက်ကမ်းက မြို့တမြို့မှာ အခြေချနေခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ ကလေးတွေလည်း ကြီးတော့ မှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ဗမာပြည်ပြန်လည်ဖြစ်တော့တယ်။အဲဒီမှာ သူလေးနဲ့ စတွေ့တော့တာပဲ။ သူလေး ဆိုတာက ကျွန်တော့်အမ ရဲ့ သမီး သူဇာခိုင်ဦး။ ကျွန်တော့် အမ … Read more
ကျနော့်ရည်းစားလှိုင်လှိုင်နှင်းနဲ့တွေ့ဖို့သူမအိမ်ဖက်ကိုကျနော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်ကျနော့်နာမည်ကဝေယံ အသက်က၂၀ ကျောင်းပြီးထားတာမကြာသေးတော့လောလောဆယ်အလုပ်အကိုင်မရှိ ၁၀၉ ၁၁၀ပေါ့ဗျာ။ လှိုင်လှိုင်နှင်းက၁၉နှစ်သူမနဲ့ရည်းဖြစ်တာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလှိုင်လှိုင်နှင်းတို့မိဘတွေနဲ့ကျနော့်မိဘတွေကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ လူကြီးချင်းကလည်းခင်မင်နေတော့လှိုင်လှိုင်နှင်းတို့အိမ်ကိုကျနော်ကတံခါးမရှိဓါးမရှိဝင်ထွက်သွားလာပေါ့ပြီးတော့နှစ်ဖက် မိဘတွေကလည်းသဘောတူထားတော့တခါတလေသူမတို့အိမ်နဲ့ကျနော်တို့အိမ်မှာတွေ့ကြစကားပြောကြပါတယ်။ လှိုင်လှိုင်နှင်းအမေကဒေါ်ခင်လေးအသက်၄၂နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီအန်တီခင်လေးကခေတ်မှီပြီးပွင့်လင်းတယ် လှိုင်လှိုင်နှင်းတို့အဖေကကွန်ဒေါင်းလေးစီးထောင်ထားပြီးအုတ်သဲကျောက်တိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သုံးစီးကိုလူငှားများကိုမောင်းခိုင်းပြီးတစ်စီးကသူကိုယ်တိုင်မောင်းပါတယ်ဦးကမနက်ဆိုကားထွက်ပြီးညမှောင်မှအိမ်ပြန်ရောက်တတ်တယ်။ လှိုင်လှိုင်နှင်းတို့အိမ်ရှေ့မှာဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီးခြံထဲဝင်လာခဲ့တယ်။လှိုင်လှိုင်နှင်းကအိမ်ရှေ့ကဒန်းလေးပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ ကျနော်သူမဘေးမှာထိုင်ပြီးကျနော်တို့စကားပြောနေလိုက်ကြတယ်။ ကျနော့်ယောက္ခမလောင်းဒေါ်ခင်လေးကအငြိမ်နေတတ် သူမဟုတ်အိမ်မှုအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေရမှခုလည်းကျနော်တို့ရှေ့မလှမ်းမကမ်းမှာကုန်းကွပြီးပန်းအိုးထဲကမြက်တွေကိုနှုတ်နေတယ်။ လှိုင်လှိုင်နှင်းနဲ့စကားပြောနေရာကအန်တီရဲ့သိပ်မတုတ်တဲ့ခါး လေးအောက်ကကားစွင့်လုံးဝန်းတဲ့တင်ကြီးကိုမသိမသာကြည့်နေလိုက်တယ် ကျနော့်ရည်းစားလှိုင်လှိုင်နှင်းကသူမအမေလို မကိတ်လှဘော်ဒီကသာမန်လောက်ပဲရှိတာကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းငယ်ငယ်လေးတွေထက်အန်တီမမကြီးအရွယ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကျနော်တို့ရည်းစားသက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲရှိသေးပေမယ့်လှိုင်လှိုင်နှင်းကိုလိုးဆော်ခဲ့တာလေးငါးဆယ်ကြိမ်မကတော့ပါဘူး။ ကျနော်ခုတလောဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးဗျာအန်တီခင်လေးကိုအရမ်းဖီးနေမိပြီးတခါတလေအန်တီ့ကိုဂွင်းတောင်မှန်းထုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။“သားဝေယံရေခဏလာပါအုံးကွယ်” ပန်းအိုးမတာမနိုင်လို့ထင်ပါရဲ့အန်တီကျနော်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ “လာပြီ အန်တီ”အန်တီ့နားကိုလျှောက်လာပြီးပန်းအိုးမတဲ့အခါအန်တီကဟိုနေရာမှာထားမယ်သားဆိုပြီးသူမကလည်းမကူပါတယ်။ ပန်းအိုးကလေးချက်နှစ်ယောက်မရတယ်အန်တီဝတ်ထားတာကဆွဲသားလည်ဟိုက်ဆိုတော့ငုံ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘရာစီယာထဲက နို့ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးကိုကျနော်တစွန်းတစမြင်လိုက်ရတယ်ပန်းအိုးမနေရင်းကအန်တီရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလှအပကိုခံစား ပြီးထားရမယ့်နေရာမှာပန်းအိုးကိုချလိုက်တယ် အန်တီလက်ဆေးဖို့ရေကန်ဖက်ကိုထွက်သွားတဲ့အခါပခုံးကျော်ရုံအုံထူနက်မှောင် တဲ့ဆံပင်များကဝဲခနဲဖြထွက်သွားပြီးကားစွင့်လုံးဝန်းတဲ့အန်တီ့တင်စိုင်ကြီးတလုံးတက်တလုံးဆင်းသွားတာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်နေတော့တယ် ဂလုခနဲစတွေးမြိုချပြီးဒန်းနားသွားပြီးလှိုင်လှိုင်နှင်းဘေးမှာထိုင်လိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့တနေ့ပေါ့အိမ်မှာအလှူရှိလို့လှိုင်လှိုင်နှင်းတို့ကိုဖိတ်ဖို့ညနေလေးနာရီလောက်မှာသူမတို့အိမ်ဖက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ခြံတံခါးဖွင့်ပြီးခြံထဲဝင်ကာတံခါးကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပြီးအိမ်ထဲကိုကျနော်ဝင်လာခဲ့တယ်။ “လှိုင်လှိုင်ရေ အန်တီ” “ဝေယံထိုင်အုံးသမီးတော့သူ့အမအိမ်သွားတာမနက်မှပြန်လာမယ်တဲ့” အန်တီကအိပ်ခန်းထဲကထမီရင်လျားနဲ့သူ့ဆီလျှောက်လာပြီးပြောတယ်။ “ဟုတ်အန်တီမနက်သားတို့အိမ်မှာအလှူရှိလို့လာဖိတ်တာပါ” ကျနော်ဆက်တီမှာထိုင်လိုက်တယ်။ရေချိုးဖို့အန်တီအိမ်ထဲကနေအိမ်ရှေ့ရေကန်ဖက်ကိုထွက်သွားတယ်။ ကျနော်ထိုင်နေရာပြူတင်းပေါက်နဲ့ရေကန်က၆ပေကျော်လောက်ပဲကွာတယ်အန်တီကရေတွေတဗွမ်းဗွမ်းလောင်းချိုး ပြီးကျနော်ထိုင်နေရာဖက်ကိုကျောပေးကာထိုင်ချလို့ဆပ်ပြာကိုစိမ်ပြေနပြေတိုက်နေတာဗျာ ရင်လျားကိုတဖက်ကကိုင် လို့နို့တွေပါဂျီးတွန်းနေတာကျနော်ကြည့်နေရင်းကလီးတောင်လာတယ်ရေကန်ကအုတ်တံတိုင်းနဲ့နီးပြီးလုံခြုံတာတကြောင်းပြီး တော့ကျနော်ကလည်းသူမသမီးရဲ့ချစ်သူဆိုပြီးအန်တီကအေးဆေးစိမ်ပြေနပြေဂျီးတွန်းနေတာယောက္ခမလောင်းရဲ့ရေစို ကိုယ်လုံးအလှကိုကျနော်တဝကြီးရှုစားနေလိုက်တယ်။ ပုဆိုးထဲကကျနော့်လီးကြီးကပေါက်ကွဲထွက်မလိုပဲတောင်မတ် နေတယ် ကျနော်ကြည့်ပြီး၃မိနစ်လောက်ကြာတော့အန်တီရေချိုးတာကိုလက်စသတ်ပြီးရေလဲထမီလဲနေပါတယ်။အန်တီဒီဖက်လှည့်မလာခင်ကျနော်ဖုံးပွတ်နေလိုက်တယ်။ “ဝုနြးးးးးးးး” “အို့ အေမ့” အိမ်ထဲအဝင်မှာအန်တီလျှော်လဲသွားတယ်ကျနော်အန်တီ့ဆီလျှောက်လာပြီးသူမဘေးမှာထိုင်လိုက်တယ်။ “အန်တီခြေခေါက်လဲသွားတာလား” “အားး ကျွတ် ကျွတ် … Read more
စံပယ်ရှင်းသန့်ဆိုတဲ့သူမ… လှသည် ယဉ်သည်… အသက်၂၀ လှသွေးကြွယ်လေးတင်မက ဖွံ့ထွားသောရင် စွံ့ကားသောတင်တို့ကြောင့် ပုရိသတို့မျက်လုံးက သူမသွားရာကပ်ပါနေတာကို ခံရသလောက် မာနကြီးသူလေးလို့ နာမည်ကြီးသူလေးရယ်ပါ… အဲ့မာနရှင်လေးရဲ့ မာနတွေကိုရိုက်ချိုးပြီး သူမရဲ့အငုံစိတ်ထဲက ကာမစိတ်တွေကို ဖော်ယူပြီး သူမကိုအရှက်ကုန်စေရုံမက လိင်ကျွန်သဖွယ် ဖာသည်သဖွယ် ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သူက အမုန်းမဲ့ဂေါ်လီ ခေါ် နေမြတ်လင်းရယ်ပါ… ဒီနေ့လည်း နေမြတ်လင်းလာမည်ဆို၍ သူမမှာ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို သေချာစွာပြုလုပ်ထားရသည်…. မကြာမီပဲ တံခါးဘဲလ်မြည်သံကိုကြားလိုက်ရ၍ တံခါးသွားဖွင့်ပေးတော့ နေမြတ်လင်းတယောက်ဝင်လာသည်… သူမလည်း နေမြတ်လင်းရဲ့အနားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဖိနပ်ကြိုးကိုဖြည်ကာ ခြေအိတ်ပါချွတ်ပေးလိုက်သည်… ထို့နောက် နေမြတ်လင်းရဲ့ နောက်တွင်ရိုကျိုးစွာ ကပ်ပါလာခဲ့သည်… နေမြတ်လင်းက ဆက်တီပေါ်တွင်ထိုင်ကာ စားပွဲခုံတွင်အသင့်ရှိနေသော ကြက်ဥကို ဖန်ခွက်ထဲတွင်ဖောက်ထည့်ကာ သံပုရာသီးစိတ်လေးညှစ်ပြီး သောက်လိုက်သည်…. ထို့နောက် မတ်တပ်ရပ်ကာ ခုံဝိုင်းမှ ထွက်လိုက်ပြီး ခုံနောက်ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ဒူးထောက်ထိုင်နေသော … Read more
မိုးစကျ နှုတျခမျးတှေ နဲ့ မဲဇာ နှုတျခမျးတှေ တျောတျော နဲ့ ခှာလို့မရကွဘူး ..။ နှုတျခမျးခငျြး ဂဟဆေကျနကွေတာ အကွာကွီး . .။ မဲဇာ ကလဲ မိုးစကျ ကို ဖကျထားတာ ကိုယျတှေ ပူးကပျနေ သညျ ..။ မိုးစကျ ရဲ့ မို့မောကျ ကော့တငျးနတေဲ့ ရငျသားတှေ မဲဇာရဲ့ ရငျဘတျကွီး မှာတအားကပျ နသေညျ ..။ မဲဇာ ရဲ့ လကျဖဝါးတှကေ မိုးစကျ ခါးလေး ကို တအားဖကျထားရာက အောကျဘကျ ကို ရှလြေ့ား သှား သညျ ..။ ခါးသေးသေးလေး အောကျ က ဝိုကျကားဖုထှကျနတေဲ့ တငျပါးအိအိတှေ ကို ပှတျသပျနေ သညျ ..။ … Read more